> Resource > Android > Sida loo soo ceshano Messages tirtiray ka HTC ugaar
Fariimaha qoraalka ah tirtiray on my HTC ugaar!
Waxaan gebi ahaan wax fikrad ah waxa ku dhacay, laakiin waxaan laga badiyay fariimaha qoraalka ah oo dhan, mid kasta oo aan diray oo helay. Waxay kaliya la waayay! Waxaan u isticmaali ugaar HTC ah. Ma aanan tirtiray jiraan farriimo nafsaddayda, sidaasi darteed ma aqaano sababta aadan. Ma jirtaa fursad ayay ii tahay inaan soo ceshano ee fariimaha qoraalka la tirtiray?
Marka laga badiyay xogta ka taleefannadooda, dad badan ayaa sheegaya in aanay garanayn sababta, maxaa yeelay, iyagu wax tirka sameeyo. Marka ay qaataan telefoonada ka soo jeebkooda, waxay heli in dhamaan fariimaha la la'yahay. Taasi waa cajiib, sax? Dhab ahaantii, ma ahan. Ku dhawaad ​​100% oo ka mid ah u isticmaali casriga ah kaas oo wax walba gacanta ku taabatid, xitaa gesturing. Marka screen aad telefoonka ee aan la qufulay, waa mid aad u fudud in ay ku shaqeeyaan wax ahaantiisa sida la tirtiro fariimaha in aad jeebka. Xitaa furo screen guriga waa suurto gal. Tan waxaa lagu magacaabaa shenanigan jeebka. Waxaad ku xad. Si kastaba, markii aad ogaato in aad heshay xogta la la'yahay, waxa habboon in aad marka hore ku riday waa helo qalab kabashada dib u soo ceshano xogta aad laga badiyay, ka dibna ay u falanqeeyaan sababta.
Hadda, bal aynu dib u arrinta dhabta ah waa inuu ahaado, sida ay u soo ceshano fariimaha tirtiray ka ugaar HTC ah. Marka hore, waxaad u baahan tahay si aad u hesho HTC ugaar qalab kabashada fariin. Ha hareerahaaga fiiri. Waxaad heli kartaa aan halkan talo: Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) . Barnaamijkan waxa aad u xirfad leh oo wax ku ool ah. Ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan waa in ay waxba ma yeeli doono oo dhan aad telefoon iyo xogta. Waxaad isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado fariimaha lumay taleefanada HTC ugaar iyo telefoonada kale oo badan Android sida Samsung Galaxy, Sony Xperia, LG Optimus, iwm Just siin isku day ah oo aad HTC ugaar.
Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone for Android
Talaabooyinka galabsaday fariimaha HTC ugaar
Tallaabada 1. sahlo debugging USB ah ee aad taleefan
First of dhan, telefoonka waa in hab debugging USB marka aad diyaariyaan inay si fiican u soo kabashada. Haddii aad hubin in aad telefoonka waa hore u debugging USB, waxaad ku boodi kartaa tallaabada xigta hadda. Haddii aan, waxaad eegi kartaa ama waxa ay haatan u dhigay: Tag Settings aad HTC ugaar, guji fursadaha Developer in menu, ka dibna hel debugging USB iyo hubi in ay awood.
Tallaabada 2. Isku aad HTC ugaar in kombiyuutarka
Marka aad telefoonka waa in hab debugging USB, xerto your computer. Suuqa kala Barnaamijku wuxuu noqon doonaa sida soo socota ka dib markii la aqoonsado telefoonka. Waxaa diyaar u ah inay hadda baarista telefoonka fariimaha qoraalka ah la tirtiro.
Tallaabada 3. Falanqeeyaan oo aad telefoonka iskaan
Hadda waxaad riixi kartaa batoonka Start ku saabsan suuqa kala kor ku xusan aad u bilowdo nidaamka iskaanka ah.
Fiiro gaar ah: Haddii qalab aad mar hore rujin, waxaad heli doontaa fariin pop-up ah shaashadda guriga ee aad telefoonka. Just riix batoonka U ogolow in ay oggolaadaan. Markaas Wondershare Dr.Fone for Android sii wadi doonaa baar telefoonka on your computer.
Tallaabada 4. Ladnaansho fariimaha lumay ee aad HTC ugaar
Ugu dambayn, waxaa jiri doona natiijo scan soo bandhigay, halkaas oo ay dhammaan xogta la helay ay si fiican u abaabulan. Waxaad dooran kartaa fariimaha inuu wax akhriyo nuxurka fariin buuxa. Sax waxyaabaha in aad rabto in aad guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Waxaad ka akhrisan kartaa fariimaha soo bandhigay natiijada baaritaan ku threads sida aad telefoon. Lifaaq in aad soo diray ama la helay fariimo ay sidoo kale laga soo saari karaa, sida sawiro, videos, waraaqaha, iwm
Download version maxkamad free hoos ku qoran marka hore in ay isku day ah:
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Messages ka HTC Mid ka mid ah
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Android inay BlackBerry
Taageerayaan Video qaabab u Android - Document rasmiga Non